Ankazobe : fiara nilatsaka tany anaty hantsana, Srilankey iray maty | NewsMada
Ankazobe : fiara nilatsaka tany anaty hantsana, Srilankey iray maty
Par Taratra sur 25/01/2016
Teratany Srilankey iray maty tsy tra-drano, roa hafa naratra mafy. Io no vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tao Andoharano, fokontanin’Ambohitrapovoany Ankazobe Rn 4 Pk 105, omaly. Araka ny loharanom-baovao voaray, fiara Renault iray nentina teratany Srilankey no nivoaka ny lalana ka nivarina tany anaty hantsana mirefy 70 metatra eo ho eo. Vokany, maty ilay Srilankey nitondra ny fiara raha naratra mafy kosa ireo namany. Voalaza fa vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza ka tsy nahafehy ny familiana intsony ilay mpamily. Tonga teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny zandary avy ao Ankazobe nanao ny fanadihadiana. Nalefa avy hatrany ao amin’ny CHD Ankazobe ireo naratra. Nalefa any amin’ny tranom-paty kosa ilay namoy ny ainy.
Olona ampolony koa naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia tamin’iny Rn 4 iny ihany, omaly vao maraina teo Andranofasika anelanelan’Ambondromamy sy Mahajanga. Taksiborosy an’ny kaoperativa iray eny Ambodivona ity namoa-doza ity vokatry ny fandehanana mafy. Avy anefa ny orana tamin’io fotoana io, nefa ny lalana malama ka tsy nahafehy ny familiana intsony ny mpamily.
Tsy vao izao fa matetika mamoa-doza hatrany ireo taksiborosy sasany mihazo amin’iny lalana iny. Eo aloha ny fisetrasetrana eny an-dalana nefa ny lalana ratsy. Manginy fotsiny ny kalitaon’ny fiara ampiasaina.